1953-1967 Evinrude ဂျွန်ဆင် 3HP Litetwin Ducktwin Tune-UP လုပ်ထုံးလုပ်နည်း | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
1953-1967 Evinrude ဂျွန်ဆင် 3HP Litetwin Ducktwin Tune-UP လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ဤစီမံကိန်းများအတွက်မော်တာမော်ဒယ် 3303S Serial B ကို 18010 ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသူသည်ငါကောင်လေးတစ်ယောက်အခါငါ့အအဘိုးခဲ့တူညီမော်ဒယ်မော်တာဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤမော်တာအများအပြားပတ်သက်သောမြတ်နိုးဖွယ်အမှတ်တရများရှိခဲ့ခြင်းနှင့်တဦးတည်းနှစ်ပေါင်း restore ချင်တယ်။ သူကသုံးစွဲဖို့အသက်ကြီးလွန်းလာပြီကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအကြှနျုပျကိုဤမော်တာအပ်ပေးတော်မူ၏။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးအကြောင်းကောင်းကောင်း run နှင့်ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုမှုကြောင့်တင်ထားတော်မူမည်ဒါကြောင့်ငါကအဖွင့်ကို fix မယ်လို့မြင်သောအခါထိုသားသည်ငါ့တုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်သိသည်။ ဤသည်မော်တာနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုနှစ်ပေါင်းများအတွက်အကြံပေးအဖွဲ့ဆဲဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားခဲ့သညျ။ ငါကပင်အဟောင်းဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူ, အသက်ရှင်ခြင်းမှ sputter ရခဲ့တယျ, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကကောင်းတစ်ဦးညှိ-Up လိုအပ်မယ်လို့သဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါဟာအစ carburetor ထံမှဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ငါဒီမော်တာဖွင့်စာကိုလက်စသတ်နေပါတယ်အခါအသစ်သောအခါ, ကအဖြစ်ကောင်းစွာပြုလုပ်ပြုသကဲ့သို့တိုင်းနည်းနည်း run လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သငျသညျက e-ဂလားပင်လယ်အော်အပေါ်န်းကျင် $ 150 မှ $ 200 ဤမော်တာကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ စိတျအပိုငျးအတွက် $ 100 န်းကျင်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဆန္ဒရှိလျှင်, သငျသညျညှိတက်ကအသစ်ကကဲ့သို့ပြေးကြနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါညှိ-Up များအတွက်အစိတ်အပိုင်းများမရှိရင်ကြောင့်ငါသည်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတ်တမ်းတင်သကဲ့သို့ငါကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မယ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ညာဘက်ကို run ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါမှာအထောက်အကူဖြစ်စေကလူ iboats.com boating ဖိုရမ်များ ဒီမော်တာအကြောင်းကိုအောက်ပါအချက်အလက်များဖြစ်သည်။
Evinrude မော်ဒယ် 3302:
HP က: 3
အလေးချိန်: 34 ပေါင်။ = 15.4 ကီလို
ဂီယာအချိုး: 17: 28
ကိုမဆိုဆက်သွယ်ဖြစ်နိုင်ဟု: .6 မှာ gapped ချန်ပီယံ J030C "(J6J မရရှိနိုင်တော့ပါ)
စသည်တို့ကို Walmart မှ OMC / BRP '' HiVis 'သို့မဟုတ်ညီမျှ 80 / 90W ပဲ့ချိတ် gearcase ရေနံ: နိမ့်ယူနစ်ရေနံ
လောင်စာဆီ / ရေနံရောနှော: 24: 1 87 ကထုတ်တဲ့ဓာတ်ငွေ့ TC-W3 ပဲ့ချိတ်ရေနံမှ (SAE 30w အကြောင်းကိုမေ့လျော့) ။
ငါသည်ဤမော်တာ disassemble သကဲ့သို့ငါအထည်နှင့်ရေမှုန်ရေမွှားသန့်စင်နှင့်အတူငါတတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကို clean up လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ အဲဒီမှာဒီရရှိနိုင်ပါသည်အများအပြားအထူးသန့်ရှင်းရေးသော်လည်း, ငါရိုးရှင်းစွာငါစုပ်အောက်မှာရှာတွေ့ထားတဲ့ဘုံအိမ်ထောင်စုသန့်စင်သုံးပြီးနေပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့ဇနီးပျောက်ဆုံးနေကတွေ့ရှိမတိုင်မီမျှော်လင့်ငါပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်လည်းသူတို့ကိုငါဆိတ်ကွယ်ရာယူအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသည်ဤအစိတ်အပိုင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
အဆိုပါမော်တော်မျက်နှာဖုံးများကိုချွတ်ယူပါ - ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အသေးစိတျအဘို့။
ပါဝါကိုဦးခေါင်း - သင်ညှိ-up, သင့်ရဲ့မော်တာမှဆုံးဖြတ်မီ, သငျသညျသေချာမော်တာကျော်ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်, သင်နှစ်ဦးစလုံးဆလင်ဒါနှင့်အတူချုံ့ရှိသည်ဖြစ်စေခြင်းငှါအလိုရှိ၏။ ယင်းမော်တာအဆိုပါ flywheel လှည့်အားဖြင့်ကျော်ဖွင့်မရပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ချုံ့ရှိသည်ဖို့မထင်ပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်သင့်မော်တာရိုးရှင်းတဲ့ညှိ-Up ထက်ပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ သင်မော်တာနှင့်မည်သို့ဝေးသင့်ရဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုသင်ယူပါလိမ့်မယ် fix ချင်ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးရွားရွားဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကညှိ-up, မျှမျှတတလွယ်ကူသည်။ piston လွတ်မြောက်စေဖို့နဲ့ချုံ့ပြန်လည်ပိုပြီးအခက်အခဲများ၏အလတ်စားအဆင့်ကိုပေါ်နှင့်ဤဆောင်းပါး၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါမော်တာ fixed မရသို့မဟုတ်ပြုပြင်တာတွေတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ငါကဒီဆောင်းပါးအဘို့ကိုအသုံးပြုပြီးသူဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမော်တာတွေနဲ့ပြုလုပ်မလိုအပ်ပါဘူးနိုငျကွောငျးပွောဆိုချင်ကြဘူး။ အခြားဆောင်းပါးမှာတော့ကျွန်မဂျွန်ဆင် 15 HP ကမော်တာအပေါ် piston လွတ်မြောက်ကြောင်းအသစ်တခုအသက်ကိုပေးတော်မူရန်ရှိသည်ခဲ့ပါဘူး။ သင်တို့ပတ်လည် $ 20 သို့မဟုတ် $ 30 အဘို့သင့်ဒေသခံအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများစတိုးဆိုင်မှာချုံ့ gauge ရနိုင်သည်။
သင်က starter ကြိုးနှင့် starter ကြိုးလက်ကိုင်ကိုအစားထိုးချင်ပေမည်။ ဒါဟာလိုအပ်သောလျှင် starter မကောင်းသောအကြံအစည်နွေဦးကိုအစားထိုးဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အစိတ်အပိုင်းများနေဆဲရရှိနိုင်ပါသည်ဒါပေမဲ့ဒီစီမံကိနျးအတှကျလိုအပျသညျ့ကြဘူး။
Carburetor - သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့အလှည့်ပတ်ထိုင်ဟောင်းမော်တာများဘယ်ချိန်မဆို, သင် carburetor ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဆီနှင့်ရောအထူးသဖြင့်လာသောအခါသဘာဝဓာတ်ငွေ့, အရောင်တင်ဆီမှဖွင့်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်သွားဖုံးဖွင့်သင့်ရဲ့ carburetor ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏လောင်စာဆီတိုင်ကီထဲမှာထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ် carburetor သို့တိုက်ရိုက်လေပေါ်မှာပနိုငျကွောငျးအများအပြား carburetor သန့်ရှင်းရေးသည်ရှိပါတယ်နေစဉ်, သူတို့တစ်တွေ carburetor ညှိ-Up ကဲ့သို့တူညီသောအရာပြီးမြောက်ဖို့နီးကပ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ယင်းမော်တာအဆိုပါ carburetor အတွက်လောင်စာမရှိဘဲသိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်တောင်မှလျှင်, gaskets ထွက်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့် crack သို့မဟုတ်လျင်မြန်စွာသင်သည်နောက်တဖန်အသုံးပြုရန်ဖို့ကြိုးစားတခါဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ သေချာ carburetor ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သွားလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း, ဖယ်ရှားရန် disassemble, သန့်ရှင်းခြင်း, အသစ်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ reassemble အစားထိုးနှင့် carburetor ညှိတက်ဖျော်ဖြေဖို့ခြေလှမ်းနေသောချိန်ညှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမော်တာများအတွက် carburetor ညှိတက်ဖျော်ဖြေမှုအတွက်အသေးစိတ်ဓာတ်ပုံတွေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်။
စက်နှိုးစနစ် - မီးပွားပလပ်နဲ့ပလပ်ဝါယာကြိုးများ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူစက်နှိုးစနစ်၏အပေါငျးတို့သ flywheel အောက်တွင်တည်ရှိသည်။ အမျိုးအစား magneto ဒီမော်တာအပေါ်စက်နှိုးနေသည် တနေ့အမှတ်နှင့်အတူ magneto Flywheel။ ၏အလုပ် စက်နှိုးစနစ်က လုံလောက်အောင်ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည် ဗို့အား အဆိုပါခုန်ဖို့ (20,000 န်းကျင် volts) အပေါက် ထိုအပေါ် မီးပွားပလပ် တစ်ဦးမီးပွားဖန်တီးခြင်းနှင့်နှင့်လောင်စာ / လေထုအရောအနှောစတငျခဲ့သညျနှင့်သေချာကြောင်းဗို့အားအတိအကျလက်ျာနှင့်အတူမီးပွား plug ကိုပေးပို့နေသည်ဖြစ်စေ အချိန်ကိုက် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အဆိုပါဖျော်ဖြေမှုအတွက်အသေးစိတ်ဓာတ်ပုံတွေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအဘို့ စက်နှိုးစနစ်အညှိတက် ဒီမော်တာသည်။
tank စမ်းသပ်ခြင်း - မရအတိအကျစမ်းသပ်အကြံပေးအဖွဲ့နေစဉ်, ငါတစ် 55-ဂါလံစည်အထိဖြည့်ပါခဲ့ဘူးအစွန်းပေါ်တွင်မော်တာဆွဲထားကြောင့်တက်မီး။ ရေတစ်ခန္ဓာကိုယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့အကြံပေးအဖွဲ့တစ်လှေပေါ်တွင်ဖြစ်စေစမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့ရှိပါတယ်ဒါသင်တို့ရှိသမျှမှာရေထဲကမော်တာကို run ချင်ကြပါဘူး, ဤမော်တာအပေါ်နားကို muffs ထားရန်ကောင်းသောအရာမလမ်းလည်းမရှိ။ ငါမော်တာဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပ်အချို့ပြဿနာများရှိသည်လုပ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရေကန်၌ဤအထဲကမကြိုးစားခဲ့ပါဘူးဝမ်းသာပါတယ်။ ယင်းမော်တာပြေး၏အကြောင်းတစ်မိနစ်အကြာတွင်ပူရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာရေဆလင်ဒါတစ်ဝှမ်းပျံ့နှံ့နေတဲ့မခံခဲ့ရကြောင်းထွက်လှည့်ခြင်းနှင့်ငါကပျက်စီးသွားသောဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုရှေ့မှာပိတ်ပစ်ခဲ့ရသည်။ ရေအောက်ပိုင်းယူနစ်အတွက်သေးငယ်တဲ့ထွက်ပေါက်ဆိပ်ကမ်းများထဲကပက်ဖြန်းခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအပူပြဿနာကိုချက်ချင်းသိသာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါမော်တာပူ running ခဲ့သံသယရှိသည့်အခါငါဆလင်ဒါခေါငျးပျေါမှာအခြို့သောရေဖြန်း, ထိုသို့ချက်ချင်း sizzle မှစတင်ခဲ့ပြီးငွေ့လှည့်။ ဤသည်ကို run နေစဉ်အတွင်းပတ်လည် 212 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာဖြစ်သင့်သည့်အခါဦးခေါင်းဖာရင်ဟိုက်အနည်းဆုံး 150 ဒီဂရီခဲ့ကြောင်းဆိုလိုသညျ။ စိတ်ပျက်နေစဉ်, ငါချမော်တာကိုပိတျထားကစတင်နောက်တဖန်နောက်တဖန်အဲဒါကို run ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မတိုင်မီချွတ်အအေးပါစေရန်ဥာဏ်ပညာခဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။
အအေးခံခြင်းစနစ်နှင့်အတူလွန်ကဲစွာပူပြဿနာများကိုပြုပြင်တာတွေ - ဤအချက်မှ Up ကိုငါမော်တာကျော်ဖွင့်မယ်လို့ကြောင့်ဆလင်ဒါခေါင်းကိုဆွဲခြင်းနှင့်ကောင်းသောချုံ့ရှိသည်ဖို့သလိုပဲဘူး။ ယင်းမော်တာအပူနှင့်အတူ, ငါရေတန်ခိုးတော်ကိုဦးခေါင်းမှတဆင့်ဖြန့်မခံခဲ့ရအဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာရန်ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးဖို့ရှိသည်မယ်လို့သိသာခဲ့ပါတယ်။ ကို click ပေးပါ ဒီမှာ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအကြောင်းကိုဖတ်ပါရန်။
ပိုများသော Tank စမ်းသပ်ခြင်း - နောက်ကျောကိုသွားနှင့်အအေးစနစ်ပြဿနာတွေကိုပြုပြင်တာတွေပြီးနောက်ကြောင့်နောက်တဖန်အခြို့သောအကြံပေးအဖွဲ့စစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အကြှနျုပျ၏အကြံပေးအဖွဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ 55-ဂါလံစည်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါပြုပြင်ဆိုင်များအများကြီးပိုကြီးတဲ့စမ်းသပ်မှုင့်ကားများရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအစသိပ်ရေကိုဖွင့်လှည့်ခြင်းမရှိဘဲမော်တာအပေါ်တစ်ဦးဝန်ထားရန်စမ်းသပ်မှုကျားကန်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီသေးငယ်တဲ့မော်တာဖြစ်ပြီးကတည်းကငါရှေ့ဆက် သွား. အပေါ်ကျားကန် left နှင့်ရေစည်အတွင်းမော်တာတက်ပစ်ခတ်ကြသည်။ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မော်တာ overheat မယ်ဆိုရင်ကြည့်ရှုဖို့ပဲ, ငါ့ကယ်ဆယ်ရေးရန်, မအမှုကိုပြု၏။ ပထမဦးဆုံးမှာမော်တာခြောငျးဆိုးနှင့် sputtered နှင့်အပြာသောမီးခိုးကြီးမားတဲ့မိုဃ်းတိမ်သည်နေသူများကဖန်တီးသောတသမတ်တည်း run ဖို့မထင်ခဲ့ပေ။ ငါထို့နောက်ငါဓာတ်ငွေ့အကြံပေးအဖွဲ့သန့်ရှင်းပေမယ့်, အ carburetor သို့ရတဲ့အချို့အမှုန်ဖြစ်ကောင်းရှိခဲ့သည်သဘောပေါက်လာတယ်။ ခဏတစ်များအတွက်မော်တာ running ပြီးနောက်, ငါ carburetor ပန်းကန်နှင့်အနိမ့်မြန်နှုန်းဂျက်ဆွဲသူတို့ကိုသန့်ရှင်း။ ငါသည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲ။ ဒါဟာမော်တာပြေး၏တုန်ခါမှုအပေါငျးတို့သ crud ချောင်ခေါက်ခဲ့သလိုပဲ။ crud အများကြီးအဆိုပါအကြံပေးအဖွဲ့နှင့်လောင်စာလိုင်းများ၌ရှိ၏ဒီတော့ဒါကမော်တာကအနည်းဆုံး 10 သို့မဟုတ် 12 နှစ်များတွင် run မခံခဲ့ရ။ ငါမော်တာ၏အိပ်မက်ကိုပထမဦးဆုံးဆွဲရက်နေ့တွင် စတင်. နှင့်ညှိတက်ပြီးနောက်ဿုံအပြေးခဲ့ပေမယ့်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာအဲဒါကိုနောက်တဖန်အကောင်းတစ်လှေမော်တာများကဲ့သို့ပြုမူရန်စတင်မယ်လို့မတိုင်မီခဏပြေးကြရသည်။ ယင်းမော်တာသို့ပွေးလေ၏ကြာကြာ, ပိုကောင်းအဲဒါကိုကျိုးခံရလျှင်သည်အတိုင်းပြုပါရန်သလိုပဲ။ ဒါကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းအပြေးနေသည်အခါမော်တာအတော်လေးတစ် torrent စေမည်ဖြစ်သောကြောင့်တစ်ဦးက 55-ဂါလံစည်စမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်စံပြမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်ရေကိုအတွက်ရေစီးကြောင်းဟာမော်တာအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်နှေးကွေးစေ၏။ ငါ carburetor ညှိနှင့်မော်တာပျင်းရိအောင်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်နေရာတစ်အိုင်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ငါမော်တာမှတဆင့်လောင်စာ၏စုံတွဲတစ်တွဲလှောင်ကန်သို့ပြေးအခြေခံအားဖြင့်ဒါဟာအဲဒီမှာထိုင်ငါ့အလုပ်ဧရိယာတက်သန့်စင်နေချိန်မှာ3သို့မဟုတ်4နာရီကို run ကြကုန်အံ့။ ငါမော်တာအဆိုပါအကြံပေးအဖွဲ့ထဲမှာဿုံ run မပြုခဲ့ကြောင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ပေမယ့်ငါကလှေပေါ်နှင့်ရေတစ်ပွင့်လင်းခန္ဓာကိုယ်၌ရှိ၏တစ်ချိန်ကမော်တာအများကြီးပိုကောင်းပြုမူမယ်လို့မိတ်ဆွေတစ်ဦးတို့ကအာမခံခဲ့သည်, ထိုသို့ထွက်လှည့်သကဲ့သို့, သူသည်ညာဘက်ခဲ့ ။ ငါနောက်ဆုံးတော့ငါသညျဤမော်တာနဲ့အိုင်ပေါ်မှာထွက်ရနိုင်တယ်လို့ရှိရာအမှတ်သို့ရောက်ရှိသည့်အခါကိုယ်ကဖျော်ဖြေလမ်းကိုအတူအတော်လေးပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဒီမော်တာထွက်ခဲ့ပါတယ်ကြောင့်အကြီးအပြေး။ ငါအသက်ပြန်ရှင်ဆောင်ခဲ့သောဤသူ 42 နှစ်အရွယ်မော်တာအရမ်းလေးစားမိပါတယ်သူတွေကိုထံမှချီးမွမ်းတွေအများကြီးရ။ ငါအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အနာဂတ်တွင်ပိုမိုမော်တာအကြောင်းကိုရေးသားဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
အဆိုပါမော်တော်ငါးဖမ်းယူပါ - ဒါဟာ Indiana ပြည်နယ်အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2009 ခဲ့ပေမယ့်မစောင့်နိုင်ဘူး။ ငါကထွက်စမ်းသပ်ဖို့ပဲတောင်ဘက် Tere Haute Indiana ပြည်နယ်မှလိပ် Creek အဘိဓါန် Reservoir ငါ့ Evinrude Lightwin ယူခဲ့ပါတယ်။ လိပ် Creek အဘိဓါန် Reservoir ကျောက်မီးသွေးပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအားဖြင့်နွေးနေသည်။ အောက်ပါ Read ဆောင်းပါး ငါ၏အငါးဖမ်းခရီးစဉ် သွား. မည်ကဲ့သို့ငါ၏အမော်တာသို့ပွေးလေ၏ဘယ်လောက်ထွက်ရှာရန်။
အဆိုပါမော်တော်ခံစားခြင်း - အခုတော့ငါသညျဤမော်တာတက်ညှိခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာပြေးကြပြီ, ငါကခံစားခဲ့ကြရတယ်။ ဒါဟာယခုမေလတွင် 10 သည်နှင့်ငါ4သို့မဟုတ်5ကြိမ်ဒီမော်တာထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ငါအသုံးပြုရန်အခါတိုင်း, ကပိုကောင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန် run ဖို့ပုံရသည်။ နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေ, မိခင်များနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကောင်းတစ်ဦးအရွယ်အိုင်ပေါ်မှာဖြစ်သောငါ့နှမရဲ့နေရာမှာစုရုံးခဲ့သညျ။ ငါ 15 '' Gheene ဂန္ထဝင်ခဲ့သောငါ၏အသေးငါးဖမ်းလှေတလျှောက်ဆောင်ခဲ့လေ၏။ ဤသည်လှေတစ်လှေမော်တာများအတွက်စတုရန်းနောက်ကျောနှင့်အတူပိုကြီးတဲ့ဖိုက်ဘာမှန်ကနူးလှေကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ငါသည်ဤလှေပေါ် 25 HP ကသလောက်ပြေးကြပေမယ့်ကျွန်မရဲ့3နှစ်အရွယ်သားနဲ့ဘယ်လိုအရာကို run ဖို့ 8 နှစ်အရွယ်ဝမ်းကွဲဆုံးမဩဝါဒ ပေး. ၏စိတ်ကူးနှင့်အတူရှိအပေါ်မှာငါ့နည်းနည်း9HP က Evinrude Lightwin မှီဝဲ။ အနည်းငယ်ထောက်ပြပြီးနောက်ကျွန်မချောင်သည့်ယောက်ျားလေးများလှည့်နှင့်သူတို့၏နှလုံးသားများအကြောင်းအရာခဲ့ကြသည်သည်အထိထိုသူအပေါင်းတို့သည်အိုင်ကျော်သို့ပွေးလေ၏။ ငါသည်အခြားလှေထဲမှာသူတို့ထဲကမျက်မှောက်အတွင်းတည်းခိုနှင့် 25 HP ကမော်တာပေမယ့်ယောက်ျားလေးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဒဏ်ငွေကိုပြု၏။ လှေထဲမှာရုံယောက်ျားလေးများနှင့်အခြားယခုအများကြီးနှင့်အတူလှေအကြောင်းကို 8 MPH မှာတလျှောက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူတို့ကပင်မော်တာသူတို့ကိုယ်သူတို့မစတင်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါမော်တာယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကနဦး startup ကိုပထမဦးဆုံးဆွဲအပေါ်အချိန်မရွေးပြန်လည်စတင်ရန်မယ်လို့ပြီးနောက်။ ငါအသုံးပြုခြင်းနှင့်အမှတ်တရများပိုပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာငါပေးမည်သောဤအနည်းငယ်သာမော်တာတွေနဲ့အတော်လေးပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ငါနောက်ပိုင်းတွင်ယခုလကနေဒါမှာရှိတဲ့ငါးဖမ်းခရီးစဉ်တက်ပေါ်နှင့်အတူဆော့ကစားရန်အယောက်ျားလေးများများအတွက်အားလပ်ချိန်မှာသို့မဟုတ်တစ်ခုခုအဖြစ်ငါနှင့်အတူအယူရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဒါဟာယခုတက် fixed နှင့်မှတ်တမ်းတင်ခံရဖို့လိုအပ်ရာငါကဒီမှာရှိအခြားမော်တာငါ့အာရုံကိုဖွင့်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။